गाउँघर नै लाहुर | Nagarik News - Nepal Republic Media
साहसिक पर्यटन अभियन्ता
कास्कीको घलेल गाउँ । तस्बिर: अमृत भादगाउँले
युवा पर्यटनकर्मी रामबहादुर गुरुङले आफ्नो होटलको नाम ‘कोकार’ राखेका छन् । कस्तो अनौठो नाम ! मर्दी हिमाल पदमार्गमा पर्ने फरेष्ट क्याम्पको वास्तविक नाम ‘कोकार’ रहेछ । उनी त्यही मौलिक नामलाई ब्युँताउँदैछन् ।
उहिल्यै जंगल बीचमा विदेशीहरूले टेण्ट गाडेर बसेकाले ‘फरेष्ट क्याम्प’ भनियो । कोकार गुरुङ भाषाको शब्द । गुरुङ शब्द ‘को’ को नेपालीमा अर्थ हुन्छ–रगत । त्यस्तै ‘कार’ को अर्थ–सुकेको । इतिहासको कालखण्डमा रगत सुकेको ठाउँ भएकाले कोकार भनिएको ।
उहिले भुरेटाकुरे राजाको शासन हुँदा लडाइँ भैराख्थ्यो । त्यो समय यहाँ धेरै रगत बग्यो । दुवै पक्षको ठूलो क्षति भयो । तर, कसैको हारजित भएन । त्यसैले दुवै पक्षले ‘अब रगत नबगाऔं । बगेको रगत सुक्न दिऔं’ भनेर यहीँ बसेर सहमति गरेछन् !’
रगत सुकेको ठाउँ भएकाले रैथाने गुरुङ समुदायले कोकार भन्न थाल्यो । बिर्सिंदै गएको नामलाई जगाएका छन् रामले । उनको ‘होटल कोकार’ ०७६ फागुनदेखि सञ्चालनमा आएको छ । त्यहाँ ६ वटा कोठा छन् । कोकार खर्कमा उनको सहित ७ होटल सञ्चालित छन् भने ५ वटा बन्दै छन् ।
नेपाली तन्नेरीेहरू माझ लोकप्रिय पदमार्ग हो–मर्दी हिमाल ट्रेक । बर्सेनि हजारौं नेपाली कोकार हुँदै मर्दी हिमालको काखमा पुग्छन् । छोटो, मीठो र सस्तो पदमार्गका रूपमा यसले ख्याति कमाएको छ ।
दुःखको कुरा अचेल मर्दी हिमालको नाउँ पनि बिगारिएको छ । धेरैको ओठमा ‘मार्दी हिमाल’ झुण्डिएको सुनिन्छ । सही नाम मर्दी हिमाल हो र त्यो हिमालको फेदबाट बग्ने मर्दी खोला । त्यसैले रामहरू ठाउँठाउँमा नेपाली भाषामा ‘मर्दी हिमाल पदमार्ग’ लेखिएको होर्डिङ बोर्ड राख्दैछन् ।
मर्दी पदमार्गमै पर्ने घलेल गाउँमा जन्मे÷हुर्केका राम ४१ वर्षका भए । पर्यटन र सामाजिक कामलाई उनले सँगसँगै अघि बढाएका छन् । कोकारमा त भर्खरै होटल खोले, उनले घलेल गाउँकै कुदी छाँगोमा ‘पोखरा क्यानोनिङ’ सञ्चालन गर्दै आएको केही वर्ष भैसक्यो ।
डोरीमा तुर्लुङ्ग झुन्डेर झरनामा नुहाउँदै झर्ने साहसिक खेललाई क्यानोनिङ (छाँगावरोहण) भनिन्छ । कुदी खोलामा १२, ९, ७५ र ४५ मिटरका चार वटा झरना छन् । झरनाको छेवैमा उनले वाटरफल रिट्रिट नामक होटल पनि चलाएका छन् जहाँ ३० जना बास बस्न सक्छन् ।
उनी बर्सेनि छ हजार जनालाई क्यानोनिङ गराउँछन् । तिनमा थोरै संख्यामा विदेशी हुन्छन् भने बाँकी सबै नेपाली । घलेलको क्यानोनिङ नेपालकै पर्यटन उद्योगमा नमुना प्रोडक्ट हो । यत्तिको व्यवस्थित क्यानोनिङ मुलुकभित्र मैले अन्यत्र देखेको छैन ।
स्थानीय युवा सुनिल गुरुङ, स्विकार सुनार, देवेन्द्र सुनार, अनिल सुनार, अशोक अधिकारी, राजकुमार गुरुङ र राजेश गुरुङ क्यानोनिङ गाइडका रूपमा स्थापित भैसकेका छन् । यहाँ क्यानोनिङ एक्सप्लोर गर्न नेपाल क्यानोनिङ एशोसियसन, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना, टान पोखरा र तत्कालीन ल्वाङघलेल गाविस, लगायतले सहयोग पु¥याएका थिए ।
आज घलेल क्यानोनिङ गाउँका रूपमा चिनिएको छ । कास्की जिल्लाको माछापुच्छे« गाउँपालिकाको ८ र ९ वडामा पर्दछ घलेल । क्यानोनिङसँगै संसारमै चम्किँदै गएको घलेलमा हेर्न र घुम्नलायक थुप्रै सम्पदा पनि छन् ।
गाउँबाट कुमारी माछापुच्छे«, मर्दी र अन्नपूर्ण हिमालको दर्शन पाइन्छ । तारे बराह, महागुरु गुफा र गुरुङ संस्कृतिको भण्डार–घलेल गाउँ । यहाँ गुरुङ र दलित समुदायको बसोबास छ । पहिला गाउँमा ठूलो बस्ती थियो । बोन धर्मावलम्बीले घना गुरुङ बस्तीको नाम लिँदा घान्द्रुक, घलेल र सिक्लेसको नाम लिन्छन् ।
‘पहिला त गाउँमा ४०० धुरी थियो’, गुरुङले सुनाए, ‘अहिले १२० धुरी मात्र छौं ।’
गाउँको शिरमा अवस्थित भैरुम डाँडामा दुइटा गुफा छन् । एउटामा बौद्ध धर्म गुरु पद्मसंभवले योग, ध्यान र तपस्या गरेका थिए भने अर्कोमा मुक्तिनाथ ओहोरदोहोर गर्ने साधुसन्त बसेका थिए । गुरु रिम्पोचे बसेको गुफा क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने काम भैरहेको छ । बेलायत निबासी आइबहादुर गुरुङले संकलन गरेर पठाएको रकमबाट गुम्बा निर्माण हुँदैछ । त्यसको अगुवाइ लामा कर्मा गुरुङले गरेका छन् ।
पहिला बेलायत जान लाग्दा त्यत्रो दुःख पाएका रामले सन् २०१२ मा चाहिँ त्यही देशमा घुम्ने अवसर पाए । त्यहाँ ४ महिना बस्दा उनले साहसिक खेल ‘वाटर स्कि’को अध्ययन गरे ।
‘महागुरु गुफालाई प्रर्वद्धन गर्न सके घलेल धार्मिक गन्तव्यका रूपमा समेत स्थापित बन्न सक्छ’, साहसिक पर्यटन अभियन्ता राम भन्छन्, ‘हिन्दू र बौद्धमार्गीको साझा तीर्थस्थलका रूपमा विकास गर्छौं ।’
घलेल गाउँ शान्त छ । गाउँमा आनन्दले दुई–चार दिन बिताउन सकिन्छ, जहाँ २०६६ सालदेखि होमस्टे सुविधा सुरु गरिएको छ । अचेल ९ घरमा होमस्टे गराइन्छ । छाँगोको छेउमा रामको होटल छ । त्यस्तै भर्खरै आइबहादुर र कन्याकुमारी गुरुङ दम्पतीले गाउँमा ‘होटल घलेल’ खोलेका छन् । लामो समय विदेश र पोखरामा बसेको यो जोडी गाउँकै पर्यटनमा योगदान पु¥याउन गाउँ फर्केको हो ।
क्यानोनिङ खेलका गाइडहरू
घलेलमा जुवातास खेल्न पाइन्न । गुप्तबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा घलेल टोल विकास संस्था गठन भएसँगै सामाजिक परिवर्तन आएको हो । संस्थाले महागुरु गुफाका लागि आर्थिक संकलनको काम पनि गरिरहेको छ ।
असला माछाका लागि समेत घलेल प्रख्यात छ । असलाको स्वाद तिक्खर हुन्छ । गाउँ मुन्तिरको मर्दी खोलामा छयासछयास्ती पाइन्छन् माछा ।
पर्यटनसँगै सामाजिक काममा पनि उत्तिकै सक्रिय छन् उनी । बौद्ध सिर्जना युवा क्लबका अध्यक्ष पनि । गाउँको बिजुली, बाटोघाटो, पाटीपौवा र विद्यालय निर्माण लगायतका काममा सहयोग गर्छन् ।
उनका समकालीनहरू सबै परदेशमा छन् । उनीचाहिँ घरदेशमा बसेर अगुवाइ गर्दैछन् । त्यसो त उनी पनि बेलायत जान हिँडेका थिए तर, नराम्ररी दुःख पाए । दलाललाई पैसाको बिटो बुझाएर दिल्लीको इन्दिरा गान्धी विमानस्थलमा उड्ने तयारीमा हुँदा पक्राउ परे । दलालले नकली भिसा बनाएको रहेछ । त्यसैले पक्राउ परिहाले र तिहाड जेलमा अढाई महिना बसे ।
बित्थामा पैसा पनि सकियो । दुःख पनि पाइयो । नेपाल फर्केपछि उनले दुई वर्ष सुन्धारा, काठमाडौंको भिक्टोरिया होटलमा काम गरे । त्यसपछिका दुई वर्ष ट्राभल कम्पनी चलाए अनि आफ्नै गाउँ फर्के ।
‘हाम्रो मर्दी हिमालक्षेत्र नेपाली पदयात्रीका कारण चलेको हो’, उनी ढुक्क छन्, ‘लकडाउनबाट उकुसमुकुस भएर बाँचेका नेपाली कोरोनाको महामारीबाट उम्केपछि फेरि घुम्न थाल्नेछन् । केही समय धैर्य गरेपछि उज्यालो दिन आउँछ ।’
समय बगिरह्यो । पहिला बेलायत जान लाग्दा त्यत्रो दुःख पाएका रामले सन् २०१२ मा चाहिँ त्यही देशमा घुम्ने अवसर पाए । त्यहाँ ४ महिना बस्दा उनले साहसिक खेल ‘वाटर स्कि’को अध्ययन गरे । उताबाट फर्केपछि पोखरा उपत्यकाको दिपाङ तालमा वाटरस्कि चलाउने योजना बनाए ।
‘ताल भाडामा मागेको’, उनले सम्झे, ‘नगरपालिकाले भाडामा दिएन ।’
त्यसपछि उनी गाउँमै बसेर काम गर्न थाले । पोखराबाट १९ किमि दूरीमा छ उनको घलेल गाउँ । गाउँमा क्यानोनिङ चलाउन पनि सजिलो कहाँ छ र ! साहसिक खेल पर्यटनको न सरकारसँग व्यावहारिक कार्यविधि छ न त गाउँपालिकासँग । सरकारले पर्यटनमैत्री नियम कहिले बनाउला खै ?
जेहोस् उनी घलेल र समग्र मर्दी क्षेत्रको पर्यटन विकासमा समर्पित छन् । हाल मर्दी पदमार्गमा ४३ वटा होटल खुलिसके । तीमध्ये ११ वटा मात्र दर्ता छन् । बाँकी सबैलाई दर्ता गरेर राज्यले कर लिँदा राम्रो ।
आज लकडाउनमा उनी गाउँघरतिरै छन् । ठूलो आशा, उत्साह र सपना बोकेर १ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर उनले कोकार होटल बनाउन नभ्याउँदै संसारलाई कोरोनाले थुचुक्क बसायो । तर, उनी निराश बनेका छैनन् । आशावादी छन् ।
ठीकै भने उनले कोरोना कारण लगत्तै कम्तीमा दुई वर्ष विदेशी पर्यटक आउने छैनन् । स्वदेशमा डुल्ने भनेका हामी नेपाली नै हौं । पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन आन्तरिक पर्यटनको योगदान ठूलो छ ।
रामहरूले मनमा आशा र उत्साहको दियो जलाइरहून् । धेरैधेरै शुभकामना !
मर्दी हिमाल पदमार्ग
प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०७७ २०:२२ शनिबार
घुमफिर पर्यटन गाउँ
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को जारी स्थायी समिति बैठक शनिबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ। नेपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले यो बीचमा नेताहरुबीच छलफल हुने बताए। 'अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमद दाहालबीच र अन्य नेताहरुबी छलफल पछि शनिबार ११ बजे स्थायी समिति पुन: बस्ने छ,' श्रेष्ठले भने।